Ajaanibta si buuxda loo tallaalay waxay booqan karaan Sydney laga bilaabo Noofembar 1
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Ajaanibta si buuxda loo tallaalay waxay booqan karaan Sydney laga bilaabo Noofembar 1
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Premier New South Wales wuxuu sheegay in la joogo waqtigii la furi lahaa si gacan looga geysto soo nooleynta dhaqaalaha, oo ay si xun u waxyeeleeyeen qufulka COVID-19 ee gobolka oo ku dhow afar bilood.
Australia waxay xirtay xuduudaheeda bishii Maarso 2020 iyadoo ka jawaabeysa masiibada COVID-19 ee adduunka oo dhan.
New South Wales, tirada dadka si buuxda loo tallaalay waxay gaartay 77.8%, halka 91.4% ay heleen ugu yaraan hal qiyaas tallaalka COVID-19.
Dhaqaalaha New South Wales waxaa si xun u waxyeeleeyay xidhitaankiisii ​​afarta bilood ahaa ee COVID-19.
New South Wales (NSW) Premier Dominic Perrottet ayaa maanta ku dhawaaqay in Sydney wuxuu u furmi doonaa booqdayaasha ajnabiga ah ee si buuxda loo tallaalo, iyada oo aan loo baahnayn karantiil, laga bilaabo Nofeembar 1, 2021.
“Waxaan u baahannahay inaan dib ugu biirno adduunka. Halkaan kuma noolaan karno boqortooyadii doogga ahayd. Waa inaan is furno, ”ayuu yiri hoggaamiyaha gobolka ugu dadka badan Australia Jimcihii.
Australia waxay xirtay xuduudaheeda Maarso 2020 iyadoo laga jawaabayo masiibada COVID-19, taasoo u oggolaaneysa gelitaanka ku dhawaad ​​si gaar ah muwaadiniinta iyo deganeyaasha joogtada ah ee laga rabay inay ku qaataan karantiil hoteel laba toddobaad ah oo khasab ah kharashkooda.
Raiisel wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay horaantii bishaan safarada dibada in ay soo laaban doonto mar hadii 80% dadka ku nool gobol gaar ah si buuxda loo tallaaley, laakiin markii hore ay heli doonaan dadka Australiyaanka ah una baahan karantiil guriga.
New South Wales, tirada dadka si buuxda loo tallaalay ayaa durba gaartay 77.8%, halka 91.4% ay heleen ugu yaraan hal qiyaas tallaalka COVID-19.
Si kastaba ha noqotee, NSW Premier wuxuu sheegay inay tahay waqtigii la furi lahaa si gacan looga geysto soo nooleynta dhaqaalaha, oo ay si xun u waxyeeleeyeen qufulka COVID-19 ee gobolka oo ku dhow afar bilood.
"Karantiilidda hoteelka, karantiilinta guriga waa wax la soo dhaafay, waxaan adduunka u fureynaa Sydney iyo New South Wales," ayuu yiri Perrottet.
Sida laga soo xigtay Perrottet, kuwa soo galaya Sydney marka hore waa inay muujiyaan caddaynta tallaalka iyo tijaabinta COVID-19 ee diidmada ah kahor intaan diyaarad loo raacin Australia.
Ka saarista shuruudaha karantiilku waxay caawin doontaa safarka caalamiga ah ee Australia waxayna u badan tahay inay soo dhoweynayaan tobanaan kun oo Australiyaan ah oo ku xannibnaa dibedda siyaasad ahaan. Waxaa sidoo kale jira kootooyin adag oo ku saabsan tirada meelaha ay heli karaan dadka socdaalka ku noqonaya karantiilidda hoteelka.
Dhanka kale, Ururka Caafimaadka ee Australia, oo matalaya dhakhaatiirta dalka, ayaa Jimcihii ka digay qaab -dhismeedkiisu inuu muujinayo in nidaamka caafimaad ee waddanku uusan awoodi doonin inuu la tacaasho qulqulka bukaannada coronavirus ka dib markii waddanku dib u furmo.